Siza Uqonde Okwengeziwe Ngokupakishwa Kwezitoti Zethu
Siza wena uqonde kabanzi ngamaphakethe ethu emakethini nathi.
I-1.Q: Athini amabhokisi we-tin?
A: Izinto ezingavuthiwe ezisetshenziselwa ukwenza ibhokisi le-tin kuyinto i-tinplate, yinsimbi ehlanganiswe ngesendlalelo esihle se-tin ngezinjongo zokuvikela i-tin.
2. Q: Asetshenziselwa ini amabhokisi wamathiyini?
A: Njengoba i-tinplate iyinto esezingeni eliphakeme epheka kahle, amabhokisi wetiye asetshenziselwa kakhulu ukufakelwa kokudla okufana namakhukhi, amainti, amakhekhe, ushokoledi, ibhisikidi, ikhofi njll kanye nokupakisha izipho zephrimiyamu.
3. Q: Ingabe amabhokisi akho e-tin aphephile ukudla?
A: Thina i-Yicheng Tin Box sisebenzisa i-lacquer ebangeni lokudla ukugqoka ngaphakathi kukathini ukuvimbela ukugqwala nokuhlangana kwethini nomkhiqizo wokudla bese siyenza ifanele futhi iphephe ekubekweni kokudla.
4. Q: Imiphi imigomo imikhiqizo yakho ehlangabezana nayo?
A: Yonke imikhiqizo yethu yi-SGS, FDA, RoHS, BPA yamahhala nePhthalates yamahhala egunyaziwe.
5. Q: Unyathelisa kanjani emithini? Ngabe ihlolwe noma icishiwe?
A: Umhlobiso we-Metal inqubo yokuphrinta eseceleni isebenzisa imibala ye-CMYK noma ye-PANTONE. Ukuphrinta kwenziwa kuqala ezinsimbi ezinkulu kuqala, bese kuhlukaniswa kube yisiqeshana esincanyana sokugcina isitembu nokwakheka.
6. Q: Ngingasithola kanjani isampula kuwe?
IMP: Ungasithumela i-imeyili ukweluleka ukuthi iyiphi into onentshisekelo kuyo, sizokunikeza amasampula wamahhala ukuze ubuyekezwe uma sinesitoko. Ungakhathazeki ngemali yamasampula yokuthumela yamanye amazwe, nathi sizoyiphatha.
7. Q: Ithini i-MOQ tin ukuhleleka?
A: Ubuncane be-oda lethu lingama-5000pcs.
8. Q: Ngingathola uhlu lwamanani?
A: Asinikezi uhlu kumakhasimende ethu. Zonke izinto zicashunwe ngawodwana. Njengoba sazi, intengo ingenziwa yizici eziningana, njengokuqina kwempahla, ukwakheka komkhiqizo, usayizi, ubuningi be-oda, imibala yopende njll. Ngakho-ke, sibala amanani njengezidingo ezenzelwe iklayenti ngalinye. Sicela usitshele izidingo zakho futhi sizokutholela ikhambi elingcono kakhulu.
9. Q: Kufanele ngidwebe kanjani ethinini?
A: Ngaphambi kokuklama noma imiphi imidwebo kuthebhu ethile, sizokunikeza ukwakheka okuyisilinganiso (umugqa wokufa) wokubeka ihluzo. Ngokwokwakhiwa kothayela, lolu lwazi lokuma lubaluleke kakhulu ukuqinisekisa ukuthi kubekwa kahle imisebenzi yobuciko kuthayela ngamunye.
10. Q: Yini inqubo yakho yokuthola isampula?
A: Okokuqala, uma unentshisekelo kunoma yiziphi izinto zethu ezikhona, sizokuthumela amasampula amahhala kuwe ukuze sibuyekezwe. Okwesibili, uma amasampula ethu esebenzela iphrojekthi yakho, sizokwenzela amasampula enzelwe wena ubuciko bakho obuprintiwe noma obucwebe noma obonakele noma i-3D efakwe kithini lethu bese siyithumela kuwe ukuze uyivume.
11. Q: Yini inqubo yakho yokuhleleka okuhlelekile?
A: Ngemuva kokuvuma amasampula enziwe ngokwezifiso esikwenzele wona futhi ukhokhela idiphozithi yokuhleleka okuhlelekile, sizoqhubeka nokukhiqiza inqwaba yakho. Ngokuvamile, kufaka lezi zinqubo: ukuphrinta kwe-tinplate, ukusikwa kwe-tinplate, ukwakhiwa kwe-tin nokupakisha. Ngemuva kwalokho ungafika noma ube nama-QC eza efektri yethu ukuzohlola umthwalo. Ngemuva kokuvumela ukuthunyelwa bese ukhokha imali esele, sizokuhlelela ukuthunyelwa.
12. Q: Uyini ukulawulwa kwekhwalithi yakho?
A: Sisebenzisa ISO9001: 2000 ne-AQL2.5-4.0
13. Q: Yimiphi imigomo oyinikezayo?
A: Singanikela ngemibandela ye-EXW, FOB, CIF, DDU ne-DDP ngokususelwa kwizidingo ezahlukahlukene ezivela kumakhasimende ethu.
14. A: Yiziphi izinsizakalo ozihlinzekayo?
Q: Sinikeza ephelele pre-ukudayiswa nangemva-ukudayiswa services. Mayelana nensizakalo yangaphambi kokuthengisa, sizwa izidingo zamakhasimende ethu futhi siwasize akhethe indlela engabizi kakhulu yokuthola imiphumela emihle kakhulu. Mayelana nensizakalo yokuthengisa ngemuva, uma kukhona izinkinga noma izingqinamba ezenzeka ngemuva kokuthi amaklayenti athole ukuthunyelwa kwethu, sizobe sithatha umthwalo ophelele wokusiza amaklayenti ukuthi awaxazulule noma anikeze isisombululo esanelisayo kumakhasimende ethu. Isibonelo, uma amaklayenti ethola noma imaphi amathini angalungile lapho ethola ukuthunyelwa, kungenzeka ukuthi sicubungula ukubuyiselwa kwemali noma senze okunye okushintshwayo kwamakhasimende ku-oda elilandelayo.
I-YiCheng Industrial (Shenzhen) LTD ungomunye wabahlinzeki bebhokisi lamathini abaphambili eChina. Isungulwe ngonyaka we-2003, besilokhu sisebenza ngokukhiqiza izinhlobo ezahlukene zekhishi le-tin, amathini okomese, i-tin can, i-tin eyindilinga, uthini wesikwele, ibhokisi lebhokisi lokudla, itini likashokholethi, uthini we-candy, itini lekhukhi, i-cookie tin , i-mint tin, itini leti, ibhokisi lesipho sebhokisi, ibhokisi lokubheka, ibhokisi le-cd tin, ibhokisi le-DVD tin, ithini lamakha, itin, isinaphi, itayiphu lebhokisi lebhokisi likathayela, ithini lekhandlela, i-tin pail, ibhakede le-tin ice, ibhokisi le-tin tin, isibambo ibhokisi le-tin nokunye.
Sizibophezele ekusizeni ukuxazulula yonke imidwebo yokupakisha amathishu nezinye izinkinga kumakhasimende ethu
sifuna ozakwethu abade emazweni amaningi. Ungathengisa imikhiqizo yakho ngephakheji lethu, Lokhu kuzokulethela inzuzo ethe xaxa. Ngikholwa ukuthi uzokuthokozela ukusebenzisana nathi.
Ungayithola Kanjani I-Tin Ethembekile Yomkhiqizi eChina?
Ungayenza Kanjani I-Tin Can Lantern?
Okungcono: Tin Can Vs Aluminium Can
Izici Eziphezulu okufanele Zicabange Lapho Kuthengwa I-Tin Can
Konke Odinga Ukwazi Nge-Tin Can Packaging
Iziqukathi Eziyingqayizivele Zesixhaxha Ezixoshwe Zilahlekile ZokupakishaJanawari 8, 2020 - 2:23 am
Ibhokisi le-Tin Embossed for Izipho Nokuphathelene KwekhandlelaJanawari 8, 2020 - 2:16 am